September 2010 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on September 24, 2010 September 24, 2010 by kyawkyawoo
တမန်တော်မူဆာ (မိုးဇက်)နဲ့နောက်လိုက်များရဲ့ဖာရိုဘုရင်လက်ကလွတ်အောင်ပြေးတဲ့ Exodus အကြောင်းကို ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ထဲမှာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားသလိုသမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ လဲဖော်ပြထားပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဖာရိုဘုရင်ရဲ့လက်ကလွတ်မြောက်အောင်ပြေးရတဲ့ တမန်တော်မူဆာနဲ့နောက်လိုက် များ ဟာပင်လယ်နီလို့ယူဆရတဲ့ ပင်လယ်ကြီးကာဆီးနေတဲ့အတွက်လွတ်လမ်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာကပင်လယ်ပြင်ကိုနှစ်ခြမ်းကွဲစေပြီးတမန်တော်မူဆာနဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလွတ်မြောက်စေပြီး၊နောက်မှလိုက်လာတဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ ဖာရိုဘုရင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးရေနစ်သေဆုံးကြရတာကိုကျမ်းမြတ်ကုရအန်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖော် ပြထားပါတယ်။ ၂း၅၀ အို-အစ္စရာအီလီမျိုးနွယ် အပေါင်းတို့၊ ပြန်လည်အောက်မေ့သတိရကြကုန် ) တရံရောအခါ၊… Read more ပင်လယ်နီနှစ်ခြမ်းကွဲသောနေရာကိုသုတေသီတို့တွေ့ပြီ
Muslim Genius engineer Al-Jazari: 800 Years After
Posted on September 22, 2010 September 22, 2010 by kyawkyawoo
Al-Jazari(1136-1206) was an important Arab Muslim scholar. He was an inventor and mechanical engineer who gained fame and glory with… Read more Muslim Genius engineer Al-Jazari: 800 Years After
About Kyaw Kyaw Oo’s Words of Love, Everything started with my principal against discrimination. I came into this blogosphere at… Read more Kyaw Kyaw Oo’s Words of Love
Posted on September 17, 2010 September 17, 2010 by kyawkyawoo
Frontal Lobe is mentioned in the Holy Quran Surah 96. I have writtenafew posts about frontal lobe( both… Read more Thinking creates more cells in the frontal lobe of Brain
Posted on September 3, 2010 September 4, 2010 by kyawkyawoo
ပါကစ္စတန် တနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရေဘေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီPost ကိုရေးဖြစ်တယ်။ သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလေးသိရအောင်အောက်ကပုံနဲ့ စာတွေအရင်ဖတ်ကြည့်ပါ။ လူ့သမိုင်းမှာလူအသေအပျောက်အများဆုံးသဘာဝဘေးဒဏ်များဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၁ခုနှစ် တရုပ်ရေဘေး လူတသန်းမှနှစ်သန်းခွဲသေဆုံး ၁၈၈၇ခုနှစ် တရုပ်ပြည်မြစ်ဝါရေဘေး လူကိုးသိန်းမှနှစ်သန်းသေဆုံး ၁၅၅၆ခုနှစ် တရုပ်ပြည်ရှန်ဇီးငလျှင်လူရှစ်သိန်းသေဆုံး(ကွဲအက်နေသောရေကာတာ) ၁၉၇၀ ဘင်္ဂလာဒရ်ှ ဘိုလားဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း သေဆုံးသူငါးသိန်း ၁၉၇၆ တရုပ်ပြည်တန်ရှန်ငလျှင်… Read more သဘာဝဘေးဒဏ်အလ္လာ့အမျက်တော်မဟုတ်